ခရစ်တော်နှင့်စတင်ရင်းနှီးခြင်း Archives | The Blue Book
ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိတယ်! ခရစ်စမတ်ဟာ ခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်!နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာ၂၅ရက်နေ့မှာခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကဂုဏ်ပြုကျင်းပကြတယ်။ဘုရားသခင်ဟာလူအနေနဲ့ဆင်းသက်လာခဲ့ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ် ၊ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့လိုလူသားအနေနဲ့ပဲနေထိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒီအရာဟာ ခရစ်စမတ်ရဲ့အကြီးမားဆုံး သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုမွေးဖွားပြီ! ယောသပ်ဟာဘာကြောင့် မာရိနဲ့စေ့စပ်ထားတာကိုမဖျက်သိမ်းခဲ့တာလဲ? မာရီဟာ သူကလေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိရှိခဲ့တာလဲ? သခင်ယေရှုဟာ ဘယ်လိုသဘာဝလွန်မွေးဖွားခဲ့သလဲ? သခင်ယေရှုမွေးဖွားစဉ်အဖြစ်အပျက်ကိုဖော်ပြပါ? ခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး အမျိုးမျိုးကြိုတင်ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ် ခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီးအောက်ပါကျမ်းချက်တွေကနေဘယ်အရာကို သင်ယူနိုင်မလဲ? ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိသော ဘုရားသခင်! “ဧမာနွေလ”ဆိုတဲ့နာမည်ကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ? “ယေရှု”ဆိုတဲ့နာမည်ကဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသလဲ? ဘုရားသခင်ဟာသခင်ယေရှုကိုဘာကြောင့် လောကကိုစေလွှတ်ခဲ့တာလဲ? AskaFriend ခရစ်စမတ်ဟာသင့်အတွက်ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဆောင်ပါသလဲ? သခင်ယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့မွေးဖွားခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး အခြားမေးချင်တာများရှိမလား? Christians also celebrate Easter. What do you know about Easter? Application သခင်ယေရှုရဲ့မွေးနေ့ပွဲဖြစ်တဲ့ခရစ်စမတ်ကိုဂုဏ်ပြုကျင်းပဖို့ သင်ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲ? What would you like to receive from God (through prayer) this Christmas? Prayer …
ဘာကြောင့်အီစတာနေ့ကအရမ်းအရေးကြီးရတာလဲ? ခရစ်ယာန်တွေအတွက်တော့, အီစတာနေ့ဟာ သိပ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အီစတာရဲ့ဆိုတာက သခင်ယေရှုအသေခံပြီး သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ခြင်းကိုပြန်လည်သတိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့များလှစွာသောအပြစ်တွေ အတွက်ပေးဆပ်ခဲ့ပါတယ်၊ သခင်ယေရှုဟာအပြစ်ရဲ့တန်ခိုး အပေါ်မှာ အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဟာအပြစ်ရဲ့ အခဖြစ်တဲ့သေခြင်း(ဝိညာဉ်သေခြင်းထာဝရငရဲ) ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ? အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းချက်တွေကိုဖတ်ပြီး မှတ်စုရေးရအောင်။ ဘာကြောင့်သခင်ယေရှုအသေခံပေးခဲ့တာလဲ? သခင်ယေရှုရဲ့အသေခံခဲ့ခြင်းက သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူအယောက်စီတိုင်း ကိုကယ်တင်ဖို့ အတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံအစည်တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့ပရောဖက်ပြုချက် တွေထဲမှာလဲသခင်ယေရှုရဲ့ အသေခံခြင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်(ဥပမာ-ဟေရှာယ ၅၃) ဘာကြောင့်သခင်ယေရှုကသူ့အသက်ကိုပေးခဲ့ရတာလဲ? ဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်သခင်ယေရှုကိုအသေခံဖို့ရန်စေလွှတ်ခဲ့တာလဲ? သခင်ယေရှုကဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပေးစားခံခဲ့ပေးသလဲ? ဘာကြောင့်သခင်ယေရှုကပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တာလဲ? သခင်ယေရှုမြှုပ်နှံခြင်းခံပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲ? သခင်ယေရှုကဘယ်လို ပြန်အသက်ရှင်လာခဲ့သလဲ? သူ့ရဲ့အသေခံပေးပြီးပြန်လည်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်သခင်ယေရှုကဘာတွေရရှိခဲ့သလဲ? ဘာကြောင့်ခရစ်ယာန်တွေဟာထာဝရအသက်ရှင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုရှိနေရတာလဲ? AskaFriend အီစတာကသင့်အတွက်ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဆောင်ပါလဲ? အီစတာဆိုတဲ့သတင်းစကားကြားပြီးတဲ့အခါသင်ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ? အီစတာနဲ့ပက်သက်ပြီးအခြားသောမေးခွန်းတွေသင့်မှာရှိနေမလား? Application ဘာကြောင်အီစတာသတင်းစကားကအရမ်းအရေးကြီးရတာလဲ? ဒီသတင်းစကားဟာ သင့်ဘဝအတွက်ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ရှိနေသလဲ? ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုတုန့်ပြန်သင့်သလဲ? Prayer Model သခင်ယေရှု, ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မှားယွင်းမှုတွေအတွက်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ကိုယ်တော်အသေခံပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ အသေခံဖို့မလိုအပ်တော့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍နေ့ရက်တိုင်းမှာ အပြစ်မှလွတ်ကင်းနိုင်ဖို့အကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးပါ။ Key Verse
ရှာသောသူတွေ့၏! ဇက္ခဲကသခင်ယေရှုကိုမြင်နိုင်ဖို့အပင်ပေါ်ထိတက်ကြည့်ခဲ့ရတယ်။သခင်ယေရှုကလဲဇက္ခဲကိုရှာနေခဲ့တာဖြစ်တယ်-အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဇက္ခဲရဲ့အသက်တာလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ သခင်ယေရှုကိုရှာဖွေခြင်း ဇက္ခဲကဘယ်လိုလူစားမျိုးဖြစ်မလဲ? ဇက္ခဲဘာကြောင်သခင်ယေရှုကိုစိတ်ဝင်စားရတာလဲ? သခင်ယေရှုရဲ့တွေ့ရှိခြင်း သခင်ယေရှုရဲ့စကားပြောခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ဇက္ခဲတယောက်ဘယ်လိုခံစားရမယ်လို့ထင်ပါသလဲ? ဇက္ခဲရဲ့ဘဝမှာပျောက်ဆုံးနေတာကဘာဖြစ်မလဲ? သခင်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ပေးခြင်း သခင်ယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးဇက္ခဲ?ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲသွား သလဲ?ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲသွားရတာလဲ? ဇက္ခဲတယောက်ကယ်တင်ခြင်းရသွားပြီလို့သခင်ယေရှုဘာကြောင့်ပြောခဲ့တယ်လိုထင်ပါသလဲ? သူငယ်ချင်းတယောက်ယောက်နဲ့အတူဆွေးနွေးရအောင် သခင်ယေရှုနဲ့ဘယ်လိုတွေ့ခဲ့တာလဲ? ယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးဘဝမှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့လဲ? လက်တွေ့အသုံးချခြင်း လက်တွေ့ဘဝမှာဆုံးရှုံးမှု၊လမ်းစပျောက်ခြင်းတွေဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ဖြစ်လာတတ်သလဲ? သင်ရောသခင်ယေရှုနဲ့တွေ့ချင်လား? ဒီလိုဆုတောင်းရအောင် သခင်ယေရှုဘုရား,ကျွန်ုပ်ကိုသိပြီးချစ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုယ်တော့်အကြောင်းကိုသာ၍သိစေ၊နားလည်စေဖို့ကူညီပေးပါ။အကျွန်ုပ်ကို ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြတော်မူပါ။ အဓိကကျမ်းချက်
“ကျောက်”ပေါ်မှာတည်ဆောက်ခြင်း သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အသက်တာအတွက် အကူအညီဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာ အများကြီး သင်ကြားပေးထားပါတယ်။သခင်ယေရှုသင်ကြားပေးထားတဲ့ ဒီပုံဥပမာထဲကနေ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုခိုင်ခံ့တဲ့အုတ်မြစ်အပေါ်မှာ အခြေတည်ထားခြင်းကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သင်ယူနိုင်ပါတယ် အသက်တာကိုတည်ဆောက်ခြင်း ဒီပုံဥပမာထဲမှာ အိမ် ကဘယ်အရာကိုပုံဆောင်သလဲ? ဒီပုံဥပမာထဲက ပညာရှိနဲ့ ပညာမဲ့သောသူ နှစ်ဦးရဲ့ခြားနားချက်ကဘာများဖြစ်မလဲ? အသက်တာရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာကို ခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ခြင်း ကဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လို့ သင်ထင်မိသလဲ? ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာကို ဘယ်အရာတွေပေါ်မှာတည်ဆောက်မိကြသလဲ?(ဥပမာ-ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး,ပညာရေး) ဘဝထဲကမုန်တိုင်းများ လေကြီး,မိုးကြီးတိုက်ခတ်ခြင်းမုန်တိုင်းတွေကဘဝအသက်တာထဲကပြဿနာတွေကိုပြောနေခြင်းပါ။ဥပမာအနေနဲ့သင့်အသက်တာထဲမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲပြသနာတွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲ? ဘဝထဲမှာတိုက်ခတ်တဲ့မုန်တိုင်းတွေကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့”အိမ်”ဘယ်လိုတွေဖျက်ဆီးနိုင်သလဲ? သူငယ်ချင်းတယောက်ယောက်နဲ့အတူဆွေးနွေးရအောင် သင့်ဘဝကိုသင်ဘယ်အရာအပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားလဲ? သင့်ရဲ့ အုတ်မြစ်ကရောဘဝမှာတိုက်ခတ်လာမယ့်မုန်တိုင်းဒဏ်ကိုခံရပ်နိုင်ဖို့ခံနိုင်ရည်ရှိထားပြီလား လက်တွေ့အသုံးချခြင်း သင့်အသက်တာရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုခိုင်ခံ့အောင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်နိုင်မလဲ? သင့်အသက်တာရဲ့ဘယ်အပိုင်းတွေမှာဘုရားသခင်အပေါ်ပိုပြီးမှီခိုဖို့လိုအပ်တယ်လို့သင်ထင်ပါသလဲ? ဒီလိုဆုတောင်းကြရအောင် သခင်ယေရှု,ကျွန်ုပ်အသက်တာရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဉာဏ်ပညာနဲ့မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ မစပါ။ကျွန်ုပ်အသက်တာရဲ့အားနည်းနေတဲ့ အပိုင်းတွေကို ပြသပေးပါ,သာ၍သန်မာလာအောင်ပြုပြင်ပေးပါ, သခင်ယေရှုအပေါ်မှာယုံကြည်ပါ၏။ အဓိကကျမ်းချက်
ဘုရားအဖြစ်ကနေလူ့ဇာတိကိုခံယူခဲ့သူ! ကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့လူတွေထဲမှာယေရှုကအကျော်ကြားဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့်သူကသာမန်လူတစ်ယောက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး၊သူပြုခဲ့တဲ့အံဩဖွယ်နမိလက္ခဏာတွေ၊လုံးဝအပြစ်မရှိပဲပြီးပြည့်စုံစွာအသက်ရှင်ခဲ့တာတွေသည်ယေရှုကဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာပြသနေပါတယ်။အဓိကကျတဲ့မေးခွန်းက-ဘုရားဖြစ်ရက်နဲ့ဘာကြောင့်များလောကကိုလူသားအဖြစ်ဆင်းလာခဲ့ရတာလဲ? ဘုရား၁၀၀% ယေရှုမွေးဖွားခဲ့ခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီးထူးခြားတာကဘာဖြစ်မလဲ? သခင်ယေရှုကဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုပြသခဲ့သလဲ? သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင် , သူကဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ,ဘယ်လိုပြောခဲ့သလဲ? သခင်ယေရှုအသေခံပြီးနောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်ခဲ့သလဲ? လူသား၁၀၀% သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့လူသားတွေနဲ့တူအောင်ဘယ်အရာတွေလုပ်ခဲ့ရတာလဲ? သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုနားလည်တယ်ဆိုတာဘယ်အရာအားဖြင့်သိနိုင်မလဲ?သခင်ယေရှု,လူသားတွေနဲ့မတူတဲ့အရာကဘာဖြစ်မလဲ? သခင်ယေရှုကဘာကြောင့်လူ့ဇာတိကိုခံယူခဲ့တာလဲ? ဘုရားရှင်ကသခင်ယေရှုကိုဘာကြောင့်လောကထဲစေလွှတ်ခဲ့တာလဲ? ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်ထားတဲ့သူ့အချစ်ကိုဘယ်လိုဖော်ပြခဲ့လဲ? ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့သခင်ယေရှုဘာတွေလုပ်ခဲ့ရသလဲ? သူငယ်ချင်းတယောက်ယောက်နဲ့အတူဆွေးနွေးရအောင် သခင်ယေရှုကိုဘာကြောင့်ယုံတာလဲ? သူကစစ်မှန်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? သခင်ယေရှုနဲ့ပက်သက်ပြီးသင့်မှာမေးစရာတွေရှိလား? လက်တွေ့အသုံးချခြင်း သခင်ယေရှုသာအခုဒီနားမှာရှိတယ်ဆိုသင်ဘာတွေပြောချင်လဲ? သူ့ကိုဘာတွေမေးချင်လဲ? သင့်ရဲ့ဘဝကိုသခင်ယေရှုဘယ်လိုကူညီနိုင်မယ်လိုသင်ထင်သလဲ? သခင်ယေရှုရဲ့အချစ်နဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းကိုသင်ခံယူချင်သလား? ဒီလိုဆုတောင်းရအောင် အရှင်ယေရှုဘုရား,ကိုယ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်ပါတယ်၊ကျွန်ပ်ကိုကယ်တင်ဖို့လောကကို ဆင်းသက်လာခဲ့ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခဲ့ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်လွှတ်လျှက်အသက်တာတစ်ခုလုံးကို လုံးဝအသစ်ဖြစ်စေပါ။ယခု ကျွန်ုပ်ကိုယ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ပါမယ်-ကိုယ်တော်နဲ့တူချင်ပါတယ်။ အဓိကကျမ်းချက်
ဘုရားသခင်နဲ့ပက်သက်တဲ့အခြေခံသမ္မာတရားလေးချက် ကမ္ဘာကြီးကို ထိန်းထားပေးထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားလိုမျိုး ရူပဗေဒနဲ့ဆိုင်တဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေရှိသလိုပဲ, ဘုရားသခင်နဲ့ဘယ်လိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပက်သက်ပြီး သမ္မာတရားနဲ့ညီပြီး အခြေခံကျတဲ့ အဖြေရှိနေပါတယ် ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုချစ်ပြီး သင့်ဘဝအတွက် အံ့ဩဖွယ်ရာ အကြံအစည်တွေရှိတယ် ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ – ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဘယ်လိုပြသခဲ့သလဲ? ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ် သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာပေးဖို့အတွက် လောကကိုလာခဲ့တာလဲ? ကျန်ုပ်တို့တွေက အပြစ်နဲ့ပြည့်ပြီး ဘုရားနဲ့ကင်းကွာနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ် တို့ဟာဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အရာတွေ, ကျွန်ုပ် တို့အပေါ်ထားတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့အချစ်တွေကို မခံစားနိုင်, မသိရှိနိုင်ကြပါဘူး။ ကျန်ုပ်တို့ဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်နေတယ် – အပြစ်ဆိုတာဘယ်လို အရာဖြစ်တယ်လို့သင်ထင်ပါသလဲ? ကျွန်ုပ်တို့ကင်းကွာသွားခဲ့တယ် – ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ရတာလဲ? ဘယ်လိုကင်းကွာသွားတာလဲ? ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကြားက ကင်းကွာနေတဲ့အရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်အရာတွေနဲ့ဖြည့်တတ်ကြသလဲ? သခင်ယေရှုသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တွေဖြေရှင်းနိုင်ဖို့တစ်ခုထဲသောအဖြေဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုအားဖြင့်သာလျှင် ကျွန်ုပ် တို့ဟာဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အရာတွေ, ကျွန်ုပ် တို့အပေါ်ထားတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့အချစ်တွေကို ခံစားနိုင်, သိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးခဲ့သလဲ? သခင်ယေရှုအသေခံပေးခဲ့ပြီးနောက်ဘာတွေဖြစ်လာခဲ့သလဲ? …
အဖေရဲ့ချစ်ခြင်း သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအရမ်းချစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့သာနောင်တနဲ့သူ့ဆီလှည့်ပြန်လာမယ်ဆိုပြန်လည်လက်ခံဖို့အသင့်ပဲဆိုတာပြောချင်လို့ဒီပျောက်သောသားပုံဥပမာကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ပျောက်သောသားကသူသွားချင်တဲ့လမ်းကိုကိုယ်တိုင်ရွေးပြီးသွားခဲ့တယ် သားအငယ်ကဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲ? သားအငယ်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ?သူ့အသက်တာမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲ? သားအငယ်က အသိတရားပြန်ဝင်လာတယ် ဘာကြောင့်သူ့အဖေအိမ်ကိုပြန်ဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ? သူ့ရဲ့အဖေနဲ့ကောင်းကင်ကိုဆန့်ကျင်ဖက်ပြုပြီးသားအငယ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့”အပြစ်”ကဘာဖြစ်မလဲ? သားအငယ်အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါသူ့ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လိုမျှော်လင့်ခဲ့လဲ? သားအဖြစ်တဖန်ပြန်လည်လက်ခံခဲ့တယ်! သူအပြစ်ထဲကျရောက်သွားခဲ့ပြီဆိုတာသိပြီးတဲ့နောက်သားအငယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ? အဖေကသားအငယ်ကိုပြန်လက်ခံခဲ့လား?ဘယ်လိုတွေသိနိုင်မလဲ? အဖေကိုသင့်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲ? သူငယ်ချင်းတယောက်ယောက်နဲ့အတူဆွေးနွေးရအောင် သင့်အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ပြန်လည်လက်ခံပေးခြင်း၊ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီးပြန်မျှဝေပေးနိုင်မလား? ဒီပျောက်သောသားပုံဥပမာကိုဘယ်လိုမြင်လဲ? လက်တွေ့ဘဝနဲ့ရောတူရဲ့လား? လက်တွေ့အသုံးချခြင်း ဘုရားသခင်ထံပြန်လှည့်ဖို့ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲ? ဒီလိုမျိုးခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းခံစားချင်သလား? ဒီလိုဆုတောင်းရအောင် ကောင်းကင်ဖခင်,ကျွန်ုပ်ကိုချစ်ပြီးခွင့်လွှတ်ဖို့၊ပြန်လည်လက်ခံပေးဖို့အမြဲအဆင်သင့်ရှိနေပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဖေ့ရဲ့အချစ်ဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကျမ်းချက်
« Two Months Reading Plan of Mark